Rita, Writing for My Sake!: မမ
Posted by Rita at 10/30/2010 10:42:00 PM
၁၀ တန်းတုံးက နယ်မှာ ဂိုဒ်ဆိုတာ မပေါ်သေးဘူး၊ ဒါပေမယ့် ၃ နှစ်စောအောင်ပြီး ဆေးကျောင်းတက်နေတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်ကို စာဝိုင်းကျက်ဖို့ခေါ်ပေးမယ်လို့ အိမ်က ပြောတာကို ကြောက်ပြီး အသည်းအသန် ငြင်းလိုက်တာ....။
ကျူရှင်လည်း ဝိုင်း ဆိုတာ လုံးဝမတက်ဖူးဘူး.. ၊၄ ဘာသာ ရိုးရိုးကျူရှင်ပဲ.. သင်ပေးမယ့်လူနဲ့ အနီးကပ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကို အတင်းစာလုပ်ခိုင်းမှာ စိုးလို့ ခပ်ခွာခွာပဲ အမြဲနေခဲ့တယ်... ဟီး....
အဲဒီ မမက လှလားဟင်။
A nice post! carry on. I'be waiting your "TO BE CONTINUED".
Your verses was evolved by your heart.
I gotagood feeling after read your emphasized and introspective writing.
၁၀ တန်းတုံးက ဖေဖေက ဂိုဒ်ခေါ်ပေးမယ်လေ ဆိုလို့သမီးကလေးမဟုတ်တော့ဘူး ကိုယ့်အချိန်စာရင်းကိုယ်နိုင်တယ် အမှတ်ကောင်းရင်ပြီးရောမှလား
လို့ လေကြီးမိုးကြီးပြောခဲ့တာသတိရတယ်။ အမှန်ကအဲလိုပုံမှန်အချိန်ဇယားချ လုပ်ခိုင်းမှာ
ကြောက်လို့ ပဲဟိ။ကိုယ့်ဘာကိုယ်က စာဖတ်ရင်းပျင်းရင်ဂိန်းထဆော့ချင်ဆော့တာဆိုတော့လေ။
ကျုရှင်လည်းတက်ချင်တာပဲရွေးတတ်တယ် မောလို့ ။
၁၀ တန်းတုန်းက ကျူရှင်ကို ၅မိုင်ဝေးတဲ့မြို့ကို စက်ဘီးစီးပြီး ဘော်တာတွေနဲ့ သွားတက်ဖူးတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မနက်၈နာရီဖွင့်မယ့် ကျူရှင်ကို မနက်၇နာရီလောက်ကစပြီး စက်ဘီးစီးသွားကြတယ်၊ ထမင်းဗူးလေးတွေ ထည့်သွားရတာပေါ့၊ ညနေတစ်တန်းရှိသေးတာကိုတက်ဖို့အတွက် ကျူရှင်က စာသင်ခန်းထဲမှာဘဲ ထမင်းစား စာဖတ်ပြီး ညနေချိန်ကို စောင့်တက်ရတယ်။ ရိုးရိုးကျူရှင်ပါဘဲ စနေဂနွေမှ ဖွင့်တာ ကြားရက်က ကျောင်းတက်ချိန်နဲ့မို့ မတက်နိုင်ဘူး။ ဂိုဒ် မပေါ်သေး။ ပို့စ်နဲ့တော့ မဆိုင်ဘူး ဟီးဟီး သူများတွေ ကျူရှင်အကြောင်း ရေးသွားလို့ ကျွန်တော်လဲ သတိရသွားတာနဲ့ ရေးချလိုက်တာ။ စိတ်ထဲ ပြန်လွမ်းသွားတယ်။
ဇွန်တို့ ၁၀တန်းတုန်းက ဂိုက်ယူတာတွေ ခေတ်စားနေပြီ။ အမေက ဂိုက်ယူမလား မေးသေးတယ်။ အိမ်မှာ စီးပွားရေးကျပြီး ပြန်ထူခါစအချိန်ဖြစ်နေတော့ ကိုယ်က အပိုလဲအကုန်မခံချင်တာနဲ့ မယူဘူး၊ ကိုယ့်ဖာသာပဲကြိုးစားမယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ တကယ်လည်း ဇွန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။
ကိုယ်နဲ့ကျူရှင်အကုန်အတူတက်တဲ့ အိမ်နီးချင်း အတန်းဖော်သူငယ်ချင်းက ယူဖြစ်တယ်။ သူက ဂိုက်မယူလဲရတယ်၊ ပင်ကိုယ်ဉာဏ်ကောင်းပြီးသား။ သူ့အိမ်က အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သူ့ကို မြန်မာပြည်ရဲ့ အမှတ်အများဆုံးလိုင်းဝင်စေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ငှားပေးတာ (မောင်နှမငါးယောက်မှာ ဆရာဝန်တစ်ယောက်မှ မပါသေးလို့)။
တကယ်တမ်း စာမေးပွဲရက်တွေမှာ ကွာခြားတာတစ်ခုကို တွေ့လိုက်တယ်။ အဲဒါ...သူ့ဂိုက်က ညတိုင်း မေးခွန်းလိုက်ပေးတယ်။ စာစီစာကုံးဆို တစ်ပုဒ်၊ အက်ဆေးဆိုတစ်ပုဒ်၊ ကွက်တိချည်းပဲ။ ကိုယ်က အကုန်ကြည့်ထားတာ၊ သူနဲ့စာမေးပွဲဖြေမယ့်မနက်တွေ့ရင် ကိုယ့်ကိုပြောတယ်။ ကိုယ်ကလည်း အဲလိုတစ်ပုဒ်တည်း ကွက်ကြည့်ရမှာကို ကြောက်တော့ သူဘယ်လောက်ပြောပြော အကုန်ကြည့်တာပဲ။ ဇွန်တို့နှစ် သမိုင်းမှာကွဲတယ်။ သူ့ဂိုက်က မနက်လေးနာရီမှာ ဖုန်းဆက်ပြီးပြောတာကို သူထကျက်လိုက်တာ အကုန်တိုးတယ်။ ဇွန်ဝိဇ္ဇာတွဲဂုဏ်ထူးမရပေမယ့် သူ ဂုဏ်ထူးရတယ်။ (ဇွန်တို့နှစ်က သမိုင်းကြောင့် တော်တော်များများ လူမှုရေးဂုဏ်ထူး ပြုတ်ကြတယ်)။ ဘာသာစုံ အမှတ်ပေါင်းလည်း ကိုယ့်ထက်များပြီး ဆေးကျောင်းကို လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ၀င်သွားတယ်။ သူဂိုက်ယူတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇွန် တစ်ခုတွေးမိသွားတယ်။ ဂိုက်ဆိုတာ စာကူကျက်ပေးရုံတင်မက မေးခွန်းလည်း လိုက်နိုင်စွမ်းရှိပါလားပေါ့...။
ကိုယ့်အတွေ့အကြုံနဲ့ ယှဉ်တဲ့ ခံစားချက် သက်သက်ပါ ရီတာ။း)
ရေးသူအတွက် ကော်မန့်က ခုမှ... :D
ဆက်ရေးပါ ရီတာ။ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ မမအကြောင်းလည်း ဆက်သိချင်တယ်။ ရီတာ အဲလို တစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခံစားမိတဲ့အတိုင်း ရေးသွားတာလေးတွေ တကယ်ကောင်းတယ်။း)
ဒီလို ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်တွေ အမှတ်တရချရေးပြီဆိုရင် လာကြမယ့် comment တွေမှာလည်း comment ပေးသူရဲ့ ဆင်တူအဖြစ်အပျက်တွေကို ပြန်သတိရစိတ်နဲ့ လာရေးကြ၊ လာ share ကြတာကို ပိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။
တခါတလေ သူများဆီမှာ ဒါမျိုး post တွေ သွားဖတ်ရရင် ကိုယ်တိုင်လည်း ဆင်တူအဖြစ်တွေကို သတိရစိတ်နဲ့ post ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာတတ်တယ်။
ဥပမာ - ပေါက် ဆီမှာ "ဆိုဖာ" ဆိုတဲ့ post ကို ဖတ်ပြီး၊ သူ့လို အိမ်က ပစ္စည်းတခုအကြောင်း မဟုတ်ပေမယ့် အတိတ်က အမှတ်တရဆိုတာတွေဆီ စိတ်ရောက်သွားပြီး "သလ္လာဝတီနဲ့မြို့ သလ္လာဝတီရဲ့မြို့" ကို ရေးဖြစ်တယ်။
ဟုတ်တယ်ရီတာ။ ဇွန်လည်း အဲလို ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကော်မန့်မျိုးတွေ ဖတ်ရတာ ကြိုက်တယ်၊ စိတ်လည်းဝင်စားတယ်။ ဥပမာ- ငယ်ငယ်တုန်းကပို့စ်မှာ ကိုယ့်လိုပဲ တခြားသူတွေ ကလေးဘ၀က ဘယ်လိုဆော့ကစားခဲ့တာလေးတွေ သိရတော့ ကြည်နူးစရာဖြစ်တယ်။း)
ဇွန် ကော်မန့်ရှည်ရှည်ရေးဖြစ်တာ ရီတာ့ဆီမှာ ရေးဖြစ်တာများတယ်လို့ ထင်တာပဲ။ ပို့စ်တစ်ပုဒ်ဖတ်ပြီးသွားရင် ကိုယ်ဖြစ်ခဲ့ကြုံခဲ့ ခံစားခဲ့ရတာတွေ ရေးခွင့်ရသွားတော့ တခါတည်း ချရေးချင်စိတ်ပေါ်ပြီး ရှည်ရှည်ရေးဖြစ်သွားတယ်။ :D
သူများ nick ကို ယူရေးထားတဲ့တယောက် nick ပြောင်းပြီး ပြန်ရေး။ တင်ပေးဖို့ စောင့်နေတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ဂိုက်လုပ်ဖူးတယ်။ ကျောင်းသားနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့က ရွယ်တူ။ သူ့ကို သူတို့အိမ်က အိမ်မှာ တရားဝင် ဆေးလိပ် သောက်ခွင့် ပေးထားတာ။ Break ယူတဲ့ အချိန် ဆိုရင် ဂိုက်နဲ့ ကျောင်းသား ၂ယောက်ပေါင်း အခန်းထဲမှာ မီးခိုးကို မွှန်နေတာပဲ။ :D